Emiliano Sala: natao veloma farany tao Argentina | NewsMada
Emiliano Sala: natao veloma farany tao Argentina
Nalevina, ny asabotsy 16 febroary lasa teo, tao amin’ny tanàna nahaterahany ao Progreso, Arzantina, i Emiliano Sala, mpilalao baolina kitra arzentina. Havana, namana sy mponina marobe ireo tonga niankohoka teo amin’ny vatam-paty sy nanao veloma farany ity mpilalao baolina kitra, maty nianjera tanaty ranomasina, ity, ny 21 janoary lasa teo.
Tonga nanome voninahitra ity fanaovam-beloma an’i Emiliano Sala ity ihanyh koa ireo manam-pahefana avy amin’ny Cardiff, nahitana ny mpanazatrany, i Neil Warnock, sy ny filohany, i Ken Cho, tao amin’ny fiangonana misy ny kliobany, tao San Martin Progresso.
Mahakasika ity fahafatesan’i Sala ity hatrany, nanambara ny klioban’ny Cardiff fa hitohy ny fanadihadiana ary hampiakarina ny raharaha raha toa ka voamarina tokoa fa tsy nahazo alalana hitondra fiaramanidina tamin’io andro nanjavonan’i Emiliano Sala io ilay mpanamory. Ity fanamarinana ity izay andrasana amin’ny fiafaran’ny volana febroary izao ary hiroso amin’ny fampiakarana ny raharaha ny klioba britanika. Marihina fa tsy mbola tsy hita, hatreto, izay nanjavonan’ilay mpanamory, i David Ibboston.